Haddii aan waligaa laguu diidin waxtarrada, lagugu xirin heshiis caymis, ama aadan maqal qof leh - waxaad tahay qof nasiib badan! Warshadaha caymiska ayaa ka mid ah kuwa ugu faa'iidada badan Mareykanka. Xisaabtu way fududahay, in ka badan dadka ay sii daayaan ha dhintaan - ayaa ka sii fiicnaanaya faa'iidooyinka.
Miyaan tan ku beddeli karnaa kan Internetka iyo barta internetka? Miyaan macno ahaan u duqeyn karnaa makiinadaha raadinta farriimaha Nuugista Cigna oo isbadal sameeya? Waxay ku andacoodaan inay ku jiraan meherad daryeel. Taasi ma runbaa? Daryeelka miyaanay dhab ahaan ku bixin lacag ka badan taan daryeelin? Waxaan aaminsanahay inay Dhakhaatiirtu daryeelaan, laakiin shirkadaha caymisku waxay leeyihiin dhiirigelin ka soo horjeedda.
Tani ma ahan wax ka hooseeya dilka darajada koowaad indhahayga. Loo shaqeeye ku lumiya shaqaale sababo la xiriira xaalado shaqo oo aan ammaan ahayn waxaa lagu soo oogi karaa dil ama dil qalad ah, maxaa diidaya in shirkadda Caymiska loo sameeyo? Cigna iskama indhatirin xaaladda, way falanqeeyeen waxayna sameeyeen xulasho miyir leh oo ay uga tagayaan bukaanka inuu dhinto.
Sheekooyinkaan labadaba waa xanaaq iyo cabsi. Haddii aad saami ku leedahay Cigna ama xitaa Iskuduwaha Miisaaniyadeed ee ay ku jiraan Cigna, waxaan kugu boorin lahaa inaadan taageerin shirkad noocaas ah. Waxaa la joogaa waqtigii shirkadaha caymiska ay ka joogsan lahaayeen inay jeebbada ku xirtaan dhiigga dadka aad u mushaharka badan.